2 N’ụbọchị nke atọ, e nwere otu oriri alụmdi na nwunye na Kena+ nke Galili, nne+ Jizọs nọkwa n’ebe ahụ. 2 A kpọkwara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya n’oriri alụmdi na nwunye ahụ. 3 Mgbe mmanya fọdụrụ ntakịrị, nne+ Jizọs sịrị ya: “Ha enweghị mmanya.” 4 Ma Jizọs sịrị ya: “Nwaanyị, gịnị jikọrọ mụ na gị?+ Oge awa m erubeghị.”+ 5 Nne ya wee sị ndị na-eje ozi: “Ihe ọ bụla ọ gwara unu, meenụ ya.”+ 6 E nwere ite nkume isii e ji agbanye mmiri, bụ́ ndị dọ n’ebe ahụ, dị ka ụkpụrụ ịdị ọcha+ nke ndị Juu kwuru ka e mee, nke ọ bụla pụrụ ịba nnukwu ite* abụọ ma ọ bụ atọ. 7 Jizọs sịrị ha: “Gbajuonụ mmiri n’ite mmiri ndị ahụ.” Ha wee gbajuo ha n’ọnụ. 8 O wee sị ha: “Ugbu a, kutenụ ya bugara onye nhazi oriri.” Ha wee buru ya bugara ya. 9 Mgbe onye nhazi oriri ahụ detụrụ mmiri ahụ e mere ka ọ ghọọ mmanya ire,+ ma ọ maghị ebe o si, ọ bụ ezie na ndị na-eje ozi bụ́ ndị kupụtara mmiri ahụ maara, onye nhazi oriri ahụ kpọrọ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ 10 wee sị ya: “Ndị ọzọ na-ebu ụzọ ebupụta mmanya dị mma,+ mgbe mmanya gbuwere ndị mmadụ, a na-ebupụta nke na-adịchaghị mma. I debere mmanya dị mma ruo ugbu a.” 11 Jizọs mere ihe a na Kena nke Galili. Ọ bụ mmalite nke ihe ịrịba ama ndị o mere, o mekwara ka ebube ya+ pụta ìhè; ndị na-eso ụzọ ya wee nwee okwukwe n’ebe ọ nọ. 12 Mgbe nke a gasịrị, ya na nne ya na ụmụnne ya ndị ikom+ na ndị na-eso ụzọ ya gbadara Kapaniọm,+ ma ha anọghị n’ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị. 13 Ememme ngabiga+ nke ndị Juu na-eru nso, Jizọs gbagokwara Jeruselem.+ 14 Ọ hụkwara ndị nọ n’ụlọ nsọ na-ere ehi na atụrụ na nduru,+ na ndị na-agbanwe ego, ka ha nọ n’oche ha. 15 Ya mere, o ji ụdọ mee ụtarị wee chụpụ ndị niile chị atụrụ na ehi bịa n’ụlọ nsọ, ọ wụfukwara mkpụrụ ego nke ndị na-agbanwe ego ma kpuo tebụl ha ihu.+ 16 O wee sị ndị ahụ na-ere nduru: “Wepụsịanụ ihe ndị a n’ebe a! Kwụsịnụ ime ka ụlọ+ Nna m bụrụ ụlọ ahịa!”+ 17 Ndị na-eso ụzọ ya wee cheta na e dere, sị: “Ekworo maka ụlọ gị ga-eripịa m.”+ 18 Ya mere, ndị Juu zara ya, sị: “Olee ihe ịrịba ama+ ị ga-egosi anyị, ebe ọ bụ na ị na-eme ihe ndị a?” 19 Jizọs zara ha, sị: “Kụtuonụ ụlọ nsọ a,+ n’ime ụbọchị atọ, m ga-ewu ya.” 20 Ya mere, ndị Juu ahụ sịrị: “E ji afọ iri anọ na isii wuo ụlọ nsọ a, ị̀ ga-ewu ya n’ime ụbọchị atọ?” 21 Ma ọ na-ekwu banyere ụlọ nsọ+ nke bụ́ ahụ́ ya. 22 Otú ọ dị, mgbe e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite ya, ndị na-eso ụzọ ya chetara+ na ọ na-ekwu ihe a; ha wee kwere Akwụkwọ Nsọ nakwa ihe Jizọs kwuru. 23 Otú ọ dị, mgbe ọ nọ na Jeruselem n’oge ememme+ ngabiga, ọtụtụ ndị nwere okwukwe n’aha ya,+ mgbe ha hụrụ ihe ịrịba ama ndị ọ na-eme.+ 24 Ma Jizọs enyefeghị+ ha onwe ya n’ihi na ọ maara ha niile 25 nakwa n’ihi na ọ dịghị ya mkpa ka onye ọ bụla gbaara ya àmà banyere mmadụ, n’ihi na ya onwe ya maara ihe dị n’ime mmadụ.+
^ Ite nke ọ bụla ga-aba lita mmiri iri abụọ na abụọ.